အချစ်ရေးမှာ လိုက်ဖက်ညီခြင်း (Compatibility) ရဲ့အရေးပါမှုနှင့် လက္ခဏာ (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
အချစ်ရေးမှာ လိုက်ဖက်ညီခြင်း (Compatibility) ရဲ့အရေးပါမှုနှင့် လက္ခဏာ (၁၀)ခု
သင့်ရဲ့အချစ်ရေးမှာ ဘယ်အရာက အချိန်ကာလရဲ့ စမ်းသပ်မှုကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စေသလဲ? သင်နဲ့ သင့်ဘဝရဲ့ အချစ်ကြားမှာ သဟဇာတ ဖြစ်စေသော မမြင်နိုင်တဲ့ အချက်တွေက ဘာတွေလဲ?
Compatibility ဖြစ်ခြင်းဆိုတာက တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို အခြားတစ်ယောက်က နားလည်ခြင်းနှင့် အမြင်တူရှိခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လိုက်ဖက်ညီတယ်/ သဟဇာတဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အချစ်ရေးကို ပုံသဏ္ဍာန်ကောင်းဖော်ပေးရာမှာ ဒါက အဓိက အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ သဟဇာတဖြစ်ခြင်းက ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်တွေမှာ ကွဲပြားမှုရှိနေရင်တောင် လက်တွဲဖော်နဲ့ အဆင်ပြေစေဖို့ ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်စေပါတယ်။ တစ်ဦးရဲ့ ယုံကြည်မှုကို တစ်ဦးက လက်ခံစေပါတယ်။ ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ compatibility က သင့်ရဲ့ အချစ်ရေးကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။
အချစ်ရေး သဟဇာတဖြစ်မှုရဲ့ အရေးပါမှု
သဟဇာတဖြစ်တယ်ဆိုတာ လက်တွဲဖော်တွေအကြားက မတူညီတဲ့တန်ဖိုးတွေ ထပ်တူကျခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်တွေ၊ လာခဲ့တဲ့ backgrounds တွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေနှင့် မတူညီတဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေတောင် ပါဝင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးဟာ လုံလောက်တဲ့ သဟဇာတမရှိတဲ့အခါ လအနည်းငယ် (သို့) နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အတွေးနှင့် ခံစားချက်တွေကို ပြောပြခြင်း၊ သင့်အတွေးဖြစ်စဉ်တွေကို ပံ့ပိုးပေးဖို့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ တစ်ယောက်ရဲ့ နှစ်သက်တာတွေ၊ မနှစ်သက်တာတွေကို တစ်ယောက်က ကြိုးစားနားလည်ခြင်းဖြင့် လက်တွဲဖော်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက အချိန်နှင့် အားထုတ်မှုတို့ဖြင့် ခိုင်မာစေတဲ့ ပင်ကိုအရည်အချင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တူညီတဲ့ ဝါသနာတွေ၊ တန်ဖိုးတွေကို မျှဝေပါတယ်
“နှစ်ယောက်လုံးက ခရီးသွားရတာကို ကြိုက်တယ်၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ပေါ်မှာ တူညီတဲ့ အမြင်တွေရှိတယ်၊ နှစ်ယောက်စလုံးက စွန့်စားရတဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို ကြိုက်တယ်။”
သင်တို့ချစ်သူနှစ်ယောက်စလုံးက စိတ်ဝင်စားမှုတွေ အများစုကို မျှဝေတဲ့အခါ အဲဒါက compatibility ထူထောင်ဖို့ လွယ်ကူလာပါတယ်။ သင့်အတွေ့အကြုံတွေ၊ အကြိုက်တွေနှင့် background က အပြန်အလှန် ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့အခါ ဘဝမှာ အပြန်အလှန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ လွယ်ကူလာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကာရိုက်တာ စရိုက်အများစုက သင့်အချစ်ရေးအတွက် ခိုင်မာသော အုတ်မြစ်တည်ဆောက်ဖို့နှင့် သင့်ကို အနာဂတ်မှာ ရေရှည်နှောင်ကြိုးခိုင်မာစေဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
၂။ နှစ်ယောက်စလုံးက ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာရင် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်
” ကောင်းပြီ၊ မင်းအလုပ်ကထွက်ပြီး အနားယူနိုင်တယ်”, ” ငါအမေနဲ့ စကားပြောရလိမ့်မယ်၊ မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ နားလည်မှု လွဲနေတာတွေကို ဖြေရှင်းပေးမယ်”
အငြင်းပွားမှုက အချစ်ရေးမှာ ထုံးစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ(သို့) ဘဝဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သဘောမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်းက ရှေ့ဆက်လို့ရမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ် းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ နှစ်ယောက်စလုံးက ကိစ္စအတော်များများကို မျှဝေတတ်ပါတယ်
နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှု စွမ်းရည်တွေရှိပြီး အရာအားလုံးကို မျှဝေတဲ့အခါ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကို သွားနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လေးနက်တဲ့ စကားတွေ ပြောဆိုတာမျိုး၊ ဖုန်းဆက်တာ(သို့) လူချင်းသွားတွေ့တာမျိုးက အောင်မြင်သော အချစ်ရေးအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ လက်တွဲဖော်တွေဟာ ဝေဖန်ခံရမှာကို ကြောက်ရွံခြင်းမရှိဘဲ စကားပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကိုယ်ချစ်မြတ်နိုးရသူကို အလွယ်တကူ ပွင့်လင်းစေပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုနီးကပ်စေပါတယ်။
၄။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်
စစ်မှန်သောအချစ်က လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်ချင်းစီအား သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကို ထိန်းသိမ်းခွင့်ပေးပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသော အချစ်ရေးမျိုးမှာဆိုရင် ချစ်သူချင်းဟာ ပျော်ရွင်မှု နှောင်ကြိုးတွေကို မျှဝေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က လေးစားမှုရှိတဲ့အခါ သင်တို့အချစ်ရေး ပိုခိုင်မာလာပါတယ်။
၅။ အချင်းချင်းက သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ယောက်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တစ်ယောက်က လုံးဝ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်နေတဲ့အခါ ကောင်းတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ လိုက်ဖက်တဲ့ လက်တွဲဖော်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ငွေရေးကြေးရေး (သို့) ဘက်ဂရောင်းအပါအဝင် အရာရာတိုင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အချင်းချင်း ရိုးသားနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူတို့က လွတ်လပ်စွာ ပြုမှုနိုင်ကြပါတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်ဖို့ တွန့်ဆုတ်နေပါက နှောင်ကြိုးဟာ ကြာရှည် မတည်မြဲနိုင်ပါဘူး။
၆။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နေရာပေးပါတယ်
သဟဇာတဖြစ်တဲ့ လက်တွဲဖော်တွေဟာ အမြဲတမ်းအတူတူ ဖြစ်နေဖို့ မလိုပါဘူး။ သူတို့က privacy ကိုလေးစားပေးပါတယ်။ အတူတူ အချိန်ကုန်ခံပြီး သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဝါသနာတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရယူကြပါတယ်။ ထိုသို့သော အချစ်ရေးဟာ အချိန်ကြာလာတာနှင့်အမျှ ခိုင်မာလာပါတယ်။ လက်တွဲဖော်မပါဘဲနဲ့လည်း ကိုယ့်အချိန်ကိုယ် ပျော်မွေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန်မှီခိုသော အချစ်ရေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်စေနိုင်သလို လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ သင့်မှာ ယုံကြည်မှု မြင့်မားပါတယ်
သင်ဘယ်လောက်သစ္စာရှိပါသလဲ? သင့်လက်တွဲဖော်ကို သင်ဘယ်လောက် ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သလဲ?
ယုံကြည်မှုကို အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရချိန်မှာ တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ လက်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေ တစ်ပုံတစ်ပင် ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ လူမှုရေးဖိအားပေးခြင်းမရှိဘဲ သူ့ကိုနှိမ့်သိမ့်ပေး ရင်ဆိုင်ပေးပါတယ်။
ယုံကြည်စိတ်ချမှု မြင့်မားခြင်းက နှောင်ကြိုးကို ပိုနက်ရှိုင်းစေပြီး နောက်ဆုံးမှာ သင့်တို့အချစ်လှေကို လှော်ဖို့ အားစိုက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ သူ့ဘာသာသူ အလိုက်သင့် စီးဆင်းပြီး ခရီးအတွက် လိုအပ်တဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ပေးပါတယ်။
၈။ တစ်ယောက်ရဲ့ မိသားစုကို တစ်ယောက်က တန်ဖိုးထားပါတယ်
တစ်ယောက်မိသားစုကို တစ်ယောက်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းက အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အချစ်ရေးရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လက်တွဲဖော် မိဘတွေအတွက် စစ်မှန်တဲ့ စောင့်ရှောက်မှုကို ပြသတဲ့အခါ သင်တို့အချစ်ရေးဟာ ခွန်အားနှင့် တန်ဖိုးများစွာကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ထို့အပြင် သင်ဟာ သင်ဟာ သင့်လက်တွဲဖော်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် လေးစားမှုကို ရရှိနိုင်ပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၉။ အတူတူ plan ချရတာကို နှစ်သက်ပါတယ်
စိတ်တူကိုယ်တူဆိုရင် ခရီးသွားရတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ငွေရေးကြေးရေးရည်မှန်းချက် စီမံရတာဖြစ်ဖြစ်၊ plan ချရတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုလွယ်ကူလာပါတယ်။ ဘဝမှာ အသစ်သေ ာအရာတွေကို ကြိုးစားဖို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် moti ပေးနိုင်၊ လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက သေးငယ်တဲ့အရာတွေကို ဖြေရှင်းတာထက် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
၁၀။ တာဝန်ဝတ္တရားတွေကို မျှဝေပါတယ်
Compatible စုံတွဲတွေက တာဝန် သေးသေး၊ ကြီးကြီး မျှဝေတတ်ကြပါတယ်။ အချင်းချင်းကူညီခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စတွေ မျှဝေခြင်းနှင့် အတူတူလုပ်ဆောင်ခြင်းက သဘာထား ကွဲလွဲမှုတွေ ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ဘဝကို ပိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူတကွ ပေါင်းသင်းနိုင်မှာပါ။
သဟဇာတဖြစ်ခြင်းက နှောင်ကြိုးကို ခိုင်မာစေပြီး တာရှည်ခံစေပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းက အပြန်အလှန်အားထုတ်မှု ဖြစ်သင့်ပြီး အတင်းအကျပ် လုပ်ယူလို့မရပါဘူး။ လက်တွဲဖော်တွေ သဟဇာတ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ဟာ တန်ဖိုးတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို မျှဝေပါတယ်။ ဒီနက်ရှိုင်းသော သဟဇာတဖြစ်မှုကို သင်တို့နှစ်ယောက်စလုံး မျှဝေမယ်ဆိုရင သင်တို့အချစ်ရေးဟာ ရေရှည်တည်မြဲလိမ့်မယ်လို့ စိတ်ချထားနိုင်ပါတယ်။